Romanian tourism to Dubai surges 24 percent | Tourism
Location: Mbido » Ịdee » Tourism » Njem nlegharị anya Romania na Dubai gafere 24 pasent
Njem nlegharị anya Romania na Dubai gafere 24 pasent
Ngalaba na-ahụ maka njem nlegharị anya na azụmaahịa nke Dubai (Dubai Tourism) ekwuola ịrị elu na-aga n'ihu na mpịakọta njem site na Romania, na-anabata ndị ọbịa 29,670 n'otu ntabi anya n'ime ọnwa atọ mbụ nke 2019. Na-eleba anya na 24 pasent kwa afọ na-abawanye afọ ma e jiri ya tụnyere otu. oge na 2018, Emirate na Pọtụfoliyo ya dị iche iche nke ebe nkiri ahụ enweela mmasị na nkwado na-aga n'ihu na ọnụ ọgụgụ nke ndị njem Romania na-ahọrọ Dubai dị ka ebe ha họọrọ.
N'okpuru nkwado nke njem nlegharị anya nke Dubai iji mepụta ahụmịhe ezubere iche na nke ahaziri maka ndị njem nleta na Romania, Emirate ahụ eguzobewo onwe ya dị ka ebe 'ga-eleta' site na ịnye ọtụtụ ihe ngosi pụrụ iche na akara ngosi maka ndị na-ege ya ntị. Site n'usoro ịzụ ahịa ahịa na-agbanwe nke ọma na profaịlụ ndị njem nleta na Romania, ngalaba ahụ na-ebuputa usoro ahịa ahịa nke ọma na ebumnuche ebumnuche ebumnuche, mkpọsa ahịa mgbe niile na mmekọrịta azụmahịa na azụmaahịa na ndị ọrụ ụlọ ọrụ isi, na-edebe obodo ahụ n'ihu uche maka ndị njem a.
Iwulite na ntinye aka nke obodo ahụ iji hụ na ịdị mfe nke nnweta maka ahịa ndị isi ya, Dubai bụ naanị oge njem dị mkpirikpi site na Bucharest, yana elele site na ụgbọ elu abụọ na-adị kwa ụbọchị n'etiti Dubai na isi obodo na flydubai. Flightsgbọ elu ndị ọzọ dị n'etiti Dubai na Bucharest yana Cluj-Napoca dị na ụgbọ elu Hungary WizzAir.
Issam Kazim, onye isi oche nke Dubailọ Ọrụ Dubai nke Njem Nleta na Azụmaahịa (DCTCM), kwuru, sị, “Anyị ahụla nkwado sitere n’aka ndị ọbịa Romania dịka otu n’ime isi ahịa anyị na-apụta, yana mmụba ọnụọgụ abụọ dị ike n’abalị ụbọchị mbụ n’ime nkeji nke mbụ nke afọ. Ọganihu a bụ ihe akaebe banyere usoro ahịa ahịa anyị nabatara na arịrịọ nke ọtụtụ ebe nkiri na ahụmịhe nke Dubai na-emetụta afọ niile.
Bucharest Corporation Dubai Marketing Tourism
Skytrax 2019 World Airline Awards: aha ụgbọ elu kachasị mma n'ụwa
Carnival Corporation: Akụkọ nkwado kwa afọ maka 2018
Ngwá agha kachasị mkpa megide ọrịa
Holland America Line na-akwado maka emume ịkpọ aha May...